Tag: Plugin | Martech Zone
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo U adeegsiga WordPress sida nidaamka maareynta maadadaadu waa wax iska caadi ah maalmahan. Qaar badan oo ka mid ah bogaggan ayaa qurux badan laakiin waxay la'yihiin istiraatiijiyad kasta oo lagu qabsado hoggaamiyeyaasha suuq geynta. Shirkaduhu waxay daabacaan wargeysyada, daraasadaha kiisaska, waxayna u adeegsadaan kiisaska si faahfaahsan iyaga oo aan weligood qabsanin macluumaadka lagala xiriirayo dadka soo dejiya. Sameynta degel websaydha la soo dejin karo oo lagu heli karo foomamka diiwaangelinta ayaa ah istaraatiijiyad suuq geyn wanaagsan. Adoo qabanaya macluumaadka xiriirka ama
WordPress: Sida loo taxo Bogagga Carruurta (My Plugin My Newest)
Jimco, Juun 13, 2018 Jimco, Juun 13, 2018 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: <1 daqiiqadii Waxaan dib u dhis ku sameynay kala saraynta boggaga dhowr ka mid ah macaamiishayada WordPress, mid ka mid ah waxyaabaha aan isku dayeyno inaan sameyno waa abaabulka macluumaadka si hufan. Si tan loo sameeyo, badiyaa waxaan dooneynaa inaan abuurno bog master ah oo aan ku darno liis si otomaatig ah u liis garanaya dhammaan bogagga ka hooseeya. Liistada bogagga carruurta, ama bogagga hoose. Nasiib darrose, ma jiraan wax hawl ah ama muuqaal ah oo tan looga dhex samaynayo gudaha WordPress, sidaa darteed waxaan soo saarnay Liis WordPress ah
Friday, July 13, 2018 Friday, July 13, 2018
Soo Bandhigida Widget Sawirka WordPress
Arbacada, December 14, 2011 Tuesday, May 3, 2016 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo DK New Media ayaa ku lahaa qalabkan WordPress-ka ah gadaal-gubiyaha in muddo ah. Baahida loo qabo fudud, tayada qalabka wax lagu beddelo ee loo yaqaan 'rotator image' waxay ahayd mid sare oo keliya macaamiisheenna, laakiin sidoo kale bulshada WordPress. Waxyaabihii aan soo helay ee ii balan qaaday inay qaban doonaan wixii aan u baahanahay ama way jabeen ama ma wada shaqeyn. Markaa annaga ayaa iska kalifnay. Nooca ugu horreeyay wuxuu ahaa mid foolxun, sidaa darteedna waligiis laguma darin Keydinta Plugin WordPress.
Markay Musiibo dhacdo!
Khamiista, Oktoobar 27, 2011 Talaado, Janaayo 29, 2013 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo 48-dii saac ee la soo dhaafay madadaalo ma lahayn. Teknoolojiyaddu waa wax cajiib ah, laakiin weligeed ma fiicna. Goorma hadday guul darreysato, ma hubo inay runti jiraan wax badan oo diyaarin ah oo aad heli karto… laakiin waa inaad jawaab ka bixisaa. Waxaa laga yaabaa inaad ogaatay in boggeena uu si gaabis ah u gaabiyay labadii toddobaad ee la soo dhaafay. Waxay ahayd wax lala yaabo xaqiiqda ah in aan ku hayno xirmo martigelin weyn oo lagu daray keydka macluumaadka iyo shabakadda gaarsiinta waxyaabaha.
Jimco, Juun 6, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo Tani waa mid gaar ah! Stephen waa saaxiib wanaagsan wiilkayga, Bill's. Istefanos waa nin weyn - aad u caqli badan, aad u xiiso badan, oo dulqaad badan. Waan ogahay marka uu ii su'aal su'aal inuu u badan tahay inuu hurdo la seexday sidaas darteed runtii waan ku raaxaystaa inaan caawiyo. Barta Stephen waa inay noqotaa mid aad u xiiso badan sanadka soo socda inta uu u safrayo Jarmalka. Jarmalka dhab ahaantii waxaa loo yaqaan la'aanta dadka wax qora.